အစားထိုးကုထုံးထင် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သင်၏စိတ်ကိုအခြားအရာတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းထက် ပို၍ ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည် (၎င်းအားကျွန်ုပ်အားသင်ကြားပေးသည့်နည်းလမ်း)
မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုမိမိကိုယ်ကိုပုံဖော်ပါ (ဤဥပမာအတွက်တစ်ခုကိုရွေးပါ။ - လှပသောနေ့၌အပြင်လူအများရှေ့တွင်တရားဝင်တင်ဆက်ခြင်း)
1 ။ သင် porn ၏စိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရိပ်တွေရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်အများအပြားနက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူရပ်တန့်နှင့်ယူ
2 ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စင်မြင့်ရှေ့တွင်ရပ်နေဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့ဒီစိတ်ကူးယဉ်နေချိန်မှာယခု, သငျသညျမဟုတ်ရင်ကြောင့်ထိရောက်သောမကျမည်အကြောင်းသင်၏အ visualization နှင့်အတူအလွန်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်ရပါမည်။ အမှန်တကယ်သင်သည်သင်၏လက်စင်မြင့်၏ထိပ်ပေါ်မှာညင်ညင်သာသာအနားယူနှင့်အတူစင်မြင့်ရှေ့တွင်မတ်တပ်ရပ်နေကြသည်ခံစားရတယ်။
3 ။ စင်မြင့်ခြင်း, texture, သစ်သားပေါ်မှာသင့်လက်၌ခံစားရ ..
4. သင်နေသာသောတောက်ပသောနေ့တစ်နေ့ကိုသင်သတိပြုမိသည်။ လေတိုက်သည်ဟုခံစားရသည်၊ လေကသင်၏မျက်နှာကိုလေနှင့်ထိစပ်နေသည်ဟုခံစားရသည်။ နေရဲ့ရောင်ခြည်တွေကသင့်ကိုထိုးနှက်တယ်။ ငှက်၏တေးသံကိုသင်ကြားသည်။ သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုဤအချက်နှင့်သင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောအသေးစိတ်ကိုခံစားရမည်။
5 ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်မတူညီသောကြောင့်လူငျသညျမှာရှာဖွေနေခြင်းနှင့်ပြုံးသတိထားမိ။ သင်ဤသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တင်ဆက်မှုမိန့်ခွန်းပေးဖို့အကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်အဖြစ်သူတို့ကသင်တို့အပေါ်မှာကြီး၏အားပေးမှုနေကြတယ်
6 ။ သင်အမှန်တကယ်သင်ဝတ်ဆင်နေသောကောင်းတဲ့ဝတ်စုံနှင့်ဘောင်းဘီခံစားရရန်စတင်ပါ။ သငျသညျလူအစုအဝေးကိုလည်းတရားဝင်ဝတ်စုံများဝတ်ဆင်သည်ကိုသတိပြုမိ။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် / မိသားစု / etc ။ သင်အပေါ်ကြီး၏အားပေးမှုဘေးမှာရှိပါတယ်
၇။ သင်မိန့်ခွန်းကိုစပြောပြီးစိတ်ထဲမှာ“ ငါအလံကိုသစ္စာရှိမယ်လို့ကတိပြု” သီချင်းကိုသီဆိုပါ။ သင်ဤသီချင်းကို ၂-၃ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲသင်လေးကိုကိုင်ရင်းအဆုံးမှာအကြီးအကျယ်လက်ခုပ်တီးသည်။
ယခုဤနည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာသည်သင်အတွေးတစ်ခုတည်းကိုသာစဉ်းစားနေရုံသာမကမတူကွဲပြားသောခံစားချက်များဖြင့်သင်၏အာရုံကိုဗုံးကြဲနေသည်။ သင်အမှန်တကယ်သင်သည်ဤမြင်ကွင်း၌ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်သင်ဤမိန့်ခွန်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးနေကြသည်။ I Pledge of သစ္စာရှိမှုကိုလည်းသီဆိုခြင်းအားဖြင့်၊ မင်းကမင်းရဲ့ခေါင်းထဲကိုနောက်ထပ်အတွေးတွေထပ်ထည့်နေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအခြားအရာများအတွက်အလွန်နည်းပါးသောနေရာမှထွက်ခွာသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတူညီသောအချိန်၌စဉ်းစားရန်ကြိုးစားနေခြင်း .. ငါတကယ်ရှိခဲ့သကဲ့သို့! သင်သည်ဤလေ့ကျင့်ခန်းသို့အမှန်ပင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်။ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးအလုံအလောက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သည့်အလွန်ထိရောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလွယ်ကူစွာသင်စိတ်ပြောင်းလိုက်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ သို့သော်အချက်မှာသင်၏စိတ်ကိုမတူညီသောခံစားမှုနှင့်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်လွှမ်းမိုးထားရန်ဖြစ်သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ) သင်၏နေရာကိုပုံဖော်ခြင်း၊ လူ၏မွှေးကိုအနံ့ခံခြင်း၊ တစ်ခုခုကိုထိခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုကြည့်ခြင်း။ အသေးစိတ်သို့သွား!
ငါဒီအချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်သုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါတကယ်ပြောတာကမင်းရဲ့စိတ်ကိုတခြားအရာတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပဲ၊ အဲဒါဟာ“ တစ်ခုတည်း” အတွေးမဟုတ်ပေမယ့်များစွာသောအဲဒါဟာအလွန်ထိရောက်တယ် သင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်ပြန်ရောက်သွားသည်ကိုသတိပြုမိပါကသင်၏စိတ်ကုန်သွားသည်အထိ ပြန်၍ ဆေးကြောပြီးထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အရှုံးပေးပြီးသင်ထထွက်ပြီးအခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရှာဖွေပါလိမ့်မည်။